Shiinaha Antibacterial dhalaalida warshadda dharka lagu buufiyo iyo saarayaasha | Langyi
Buufinta dhalaalka waa sheyga aasaasiga u ah soo saarista waji-ka-ilaalinta iyo alaabada kala-soocidda kala duwan iyo alaabooyinka go'doominta ah. Waxaa loo sameeyaa si nasiib ah oo loo qaybiyo 0.5-10.0 m polypropylene fiber oo leh dabacsanaan sare (≥75%). Waxay leedahay sifeyn wanaagsan, gaashaan, dahaadh iyo saliidda nuugista. Waxtarka shaandhaynta ee dharka xereenka caadiga ah ee dharka lagu buufiyo waxay gaari kartaa 35%, iyo tan dhalaalka marada ku xereen ka dib daaweynta elektrooniga waxay gaari kartaa in ka badan 95%.
AntibacMaxTM Maaddada lagu buufiyo bakteeriyada bakteeriyada disha waxay soo bandhigeysaa tamar aad u sarreysa oo antibacterial anti-virus anti-virus ions iyo ion zinc oo ku saleysan dharka lagu buufiyo dhalaalka caadiga ah, dilaya bakteeriyada iyo fayrasyada ku xanniban goobta, kor u qaadida shaqada ilaalinta iyo nabadgelyada dharka ku buufinta dhalaalka.
Effect Saamaynta shaandhaynta wanaagsan
Daaweynta korantada kadib, waxtarka sifaynta bakteeriyada ayaa ka sareysay 95%.
Waxqabadka joogtada ah ee muddada-dheer, illaa 3 sano.
Performance Waxqabadka is-nadiifinta
waxay leeyihiin saamayn bakteeriya wanaagsan oo kudhalata escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pneumococcus, pseudomonas aeruginosa.
Waxay sidoo kale leedahay saameyn wanaagsan oo xakameyn ah fangaska iyo fayrasyada kale.
jeermiska anti-bakteeriyada ee lagu buufiyo dharka
walxaha firfircoon ee bakteeriyada
Ion qalin, Zinc ion
Caddaan, dusha sare oo siman, ma laha wax wasakh ah, godad ma leh
Heerka ka hortagga bakteeriyada ee E. coli ≥99%
Hore: Bakteeriyada bakteeriyada dilaacaysa ee loo yaqaan 'masterbatch'
Xiga: Antibacterial maro aan goyn
Maro Mashiinka Buufiya ee Antibacterial-ka
Wakiilka Polymeric Antihydrolysis, Yarn bakteeriyada, Antibacterial Electret Masterbatch, Maqaarka Antiwo Bakteeriyada Aan Laheyn, Bakteeriyada bakteeriyada dhalaalaysa-Blown Masterbatch, Masterbatch antibacterial,